Saturday April 25, 2020 - 06:48:57 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamo katirsan booliska dowladda Federaalka ayaa xalay fiidkii isgoyska Jubba ee degmada Boondheere ku dilay laba ruux shacab ah oo ay ku eedeeyeen in ay ka dhega adeygeen badowga la saaray degmooyinka gobolka Banaadir.
Goob joogayaal ayaa sheegay in askari boolis ah uu si bareer ah utoogtay wiil dhalinyara ah oo ku sugnaa isgoyska Jubba daqiiqado kadibna askari kale ayaa toogtay haweenay goob ganacsi ku laheyd afaafka hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta.
Markii ay dilalku dhaceen kadib ayay dibad baxyo ballaaran ka dhaceen wadada dheer ee hormarta xarunta Nabad sugidda illaa iyo isgoyska Jubba, shacabka caraysan ayaa taayarro ku gubayay wadada waxayna ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah DF-ka.
Sidoo kale iskusoo baxyo rabshado wata ayaa xalay fiidkii ka dhacay xaafadda Ceeltubaweyne ee degmada Yaaqshiid, boqolaal kamid ah dhalinyarada xaafadda ayaa dhagxaan ku weeraray ciidamo boolis ah oo dadka ka raafayay xaafadaha.
Bandowga lagusoo rogay magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii ah ayaa diidmo adag kala kulmaya shacabka gaar ahaan ganacsatada ka shaqeysta maqaayadaha iyo dhalinyarada waxaana albaabada laysugu dhuftay masaajidda waaweyn ee lagu tukan jiray salaadaha Taraawiixda inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.